Eqolo Seal Doors
Bio-ukhuseleko Pass Box
eye yomsuki weengubo
Room Iminyango Nomonde
X-reyi Room Doors
Panel DB Press Machine
Baphile Doors hlela
Personal imisebe zokhuseleko
Lead ifaskoti lwesiphathi
x-reyi film umbukeli
x-reyi Isalathisi ukukhanya
Ifunyanwa e Ningbo, isixeko kwizibuko esihle eMzantsi East China, Golden Door Technology iye ezizodwa ekunikeni izisombululo umnyango zamayeza, izibhedlele, amashishini zenyukliya kunye namashishini ifriji ukususela 2009. Kufuneka phantse iminyaka elishumi amava ekuyileni mveliso iintlobo ezahlukeneyo iminyango imithi, iilebhu nokuphepha, amagumbi okusebenzela, amagumbi X-ray, amagumbi CT, amagumbi PET / CT, amagumbi MRI, amagumbi ecocekileyo, amagumbi ezibandayo kunye nezicelo yenyukliya.
Phambi kokuba uqale yeprojekthi, iqela lethu ifumaneka uncedo kuwe ekukhetheni iingcango ezifanelekileyo ngokwe izicelo ezahlukeneyo. Sihlele, ukwenziwa kwezinto ufake iingcango zethu kuwe. Sinikeza yonke indlela emva kwenkonzo kwentengiso iingcango zethu.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, amawaka iingcango zethu ziye zafakelwa iiprojekthi ezahlukeneyo ehlabathini lonke kwaye zamkelwe kakuhle emarikeni. Thina amaqabane ezoshishino ixesha elide e Australia, kuMbindi Afrika, South Africa, Middle East ne-South Asia. iinkampani ngakumbi nangakumbi ziseke ubudlelwane ishishini elide kunye nathi ngenxa iimveliso zethu ethembekileyo kunye neenkonzo.
Door Golden ayiboneleli kuphela iingcango, kodwa noko ukubafuna ezinye izinto ezinxulumene ngayo abaxhasi bethu njenge value added inkonzo enye. Ngenxa namaqabane ethu ezoshishino zexesha elide, siye sibe namava ngakumbi nangakumbi souring kwaye ukunceda abathengi bethu inkonzo exabisekileyo kakhulu.
Golden Door Team kuhlala apha ukunika izisombululo emnyango elungileyo kunye nezinto ezinxulumene ukuba iiprojekthi zakho.
Iselula & Whatsapp: 86-15990207615
Iindaba ezilungileyo ezivela kwamanye amazwe